ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ် လူထုသမ္မတကြီး – International War News Journal
International War News Journal
နိုင်ငံတကာစစ်သတင်း ဂျာနယ်တွင် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသော သတင်းများကို စာပေ၊ ရုပ်သံ ကဏ္ဍစုံလင်စွာဖြင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါပြီ။ Daily update war news with international and national news. First international war news journal in Myanmar.
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ် လူထုသမ္မတကြီး
Posted on March 15, 2016 by MMAGTECH
ယခု အချိန်အခါသမယမှာဆိုရင် မြန်မာပြည်သူ၊ နိုင်ငံသား တစ်ရပ်လုံး၊ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ မိဘ ဆွေမျိုးများ၊ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေအပေါင်း နှင့်တကွ ကျွန်တော်တို့International War News Journal – နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းဂျာနယ် – မှ စီစဉ်တင်ဆက်ထုတ်လုပ်သူ ဝန်ထမ်းအပေါင်းနှင့် အယ်ဒီတာချုပ်တို့ သည် ကျွန်တော်တို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး၏ ပထမဆုံးသော ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက တင်မြောက်သည့် အမျိုးသားသမ္မတကြီးနှင့် ဒုသမ္မတများ ရွေးခြယ်ပွဲကြီးကို နိုင်ငံ၏ အရပ်ရပ်သောဒေသတို့ တွင် ရင်ခုန်စွာဖြင့် စောင့်မျော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရပြီးနောက် ယခုအခါ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ပီတိရွှင်ပြ ဖြစ်ကြရပါပြီ။
အမိမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်နှင့် ဒုသမ္မတများ၊ NLD ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်နှင့် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအား ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတကာ စစ်သတင်းဂျာနယ်မှ ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထို့ အပြင် နိုင်ငံတဝန်းတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပဋိပက္ခစစ်ပွဲများသည်လည်း အလျင်အမြန် ချုပ်ငြိမ်းနိုင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော နိုင်ငံတော်တစ်ခု ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါစေဟု ထပ်မံဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူတိုင်းရင်းသားတစ်ရပ်လုံး စစ်မှန်သောငြိမ်းခြမ်းရေးကြီးကို လိုအပ်နေသည်မှာ အနှစ်နှစ်၊ အလလများစွာ ကြာညောင်းနေခဲ့ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ယခုအချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအသစ်တစ်ဖွဲ့ လုံးမှ စစ်မှန်သောငြိမ်းခြမ်းရေးကြီး အမှန်တကယ်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ အတူ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကလည်း မိမိတို့ ရရှိထားသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးမှနေ၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး အမှန်တရားကို ထာဝစဉ်လက်ကိုင်ထားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်ဟု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းဂျာနယ်အဖွဲ့ သူ၊အဖွဲ့ သားများမှ ဆုတောင်းဝေငှပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး အားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
စစ်မှန်သော ပြည်သူရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်
Photo #Myanmar-Now News
Reporting by #International War News Journal.
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ် လူထုသမ္မတကြီး March 15, 2016
မင်္ဂလာသတင်းကောင်း March 7, 2016
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်မှ ၄င်း၏စစ်တပ်အား နျုကလိယားလက်နက်အား အဆင်သင့်ပြင်ခိုင်း (ရုပ်သံ) March 4, 2016
အီရတ်နိုင်ငံ နာမည်ကျော် အထူးတပ်ဖွဲ့ များမှ ISIS စစ်သွေးကြွများအား တိုက်ခိုက်ချေမှုန်း (ရုပ်သံ) March 4, 2016
အမေရိကန်စစ်တပ်ထုတ် ၆၃ တန်ချိန်ရှိ M1A1 Abram တင့်ကား Drift မောင်းနှင်ပြသ February 19, 2016
Now our website is available to work together with you and your company.
You can advertise about your business on our website with various kind of standard rate.
For more information, please send us an email to: aungzinlinn.international@gmail.com
Trump Says Those at the 'Higher Ends of Intelligence' Loved His Remarks With Putin - New York Times July 18, 2018
New York TimesTrump Says Those at the 'Higher Ends of Intelligence' Loved His Remarks With PutinNew York TimesWASHINGTON — President Trump said Wednesday that “many people at the higher ends of intelligence” loved his performance during Monday's joint news conference in Helsinki, Finland, with President Vladimir V. Putin of Russia. But it was […]
Thailand cave rescue: Boys recount moment they became trapped - CNN July 18, 2018
CNNThailand cave rescue: Boys recount moment they became trappedCNNChiang Rai, Thailand (CNN) The 12 members ofayouth soccer team and their coach who spent more than two weeks trapped underground inaflooded cave network in northern Thailand have appeared in public for the first time since their ordeal. The boys ...Thai soccer team opens up about dramatic […]
South Africa, Obama mark Mandela centennial with charity - Washington Post July 18, 2018
Washington PostSouth Africa, Obama mark Mandela centennial with charityWashington PostJOHANNESBURG — South Africans along with former U.S. President Barack Obama were marking the centennial of anti-apartheid leader Nelson Mandela's birth on Wednesday with acts of charity inacountry still struggling with deep economic inequality 24 ...Graça Machel: Wha […]
Trump says 'no rush' on North Korea nuclear negotiations - CNN July 18, 2018
CNNTrump says 'no rush' on North Korea nuclear negotiationsCNN(CNN) President Donald Trump said Wednesday there is "no rush" in its negotiations with North Korea over Pyongyang's nuclear weapons program. "Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is ...South Korea Suspe […]
Hledan, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Email – aungzinlinn.international@gmail.com
Copyright © 2016 by AZL Group.